Goynta Laser ee Film Bedelka Heat Milicsi
Xalka Goynta Laser ee Film Milicsiga
Goldenlaser wuxuu naqshadeeyaa oo soo saaraa mashiinnada goynta laser-ka gaar ahaan jarista filimka gudbinta kulaylka ee milicsiga. Goynta goynta Laser waxaa lagu gartaa heer sare oo sax ah, dabacsanaan, otomaatig, qashin yar iyo maqnaanshaha baahida qalabaynta. Iyada oo leh mashiinka goynta laser-ka, soosaarayaasha filimada milicsiga ayaa dardar gelin kara geedi-goynta, gaaraan alaabo dhammeystiran oo tayo sare leh iyo sidoo kale badbaadinta kharashyada iyo kheyraadka.
Faa'iidooyinka jarista filimka milicsiga leh goos-gooyaha leysarka dahabka ah
Hawlgal dijitaal ah oo dhammaystiran - Si tartiib ah u duub goynta laser -ka
Dhab ahaan dhunkashada laser-goynta naqshado aad u faahfaahsan
Si dhakhso leh ayaa loo gooyey laser si adag loo diyaariyey godad yaryar oo fudud
Si dhakhso leh u jeesso, Looma baahna inaad sugto qalabka la sameeyo.
Ku habboon wax-soo-saarka dalabka. Jawaab deg-deg ah oo ku saabsan amarrada muddada gaaban.
Geedi socod si otomaatig ah: hawl -wadeenku wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu soo raro oo dajiyo duubista substrate -ka.
Tirtir kharashaadka geerida makaanikada iyo kharashaadka bakhaarka, badbaadinta waqtiga iyo shaqada.
Si isdabajoog ah u duudduub goynta. Lambarka QR/Baaritaanka koodhka, wuxuu taageeraa isbeddelka shaqooyinka marka la duulayo.
Awood u leh soo saarista naqshadaha ugu qallafsan iyo faahfaahinta yaryar waqti gaaban gudahood.
Lasers -ku waxay bixin karaan goynno kala duwan: goyn buuxda, goynta dhunkashada, jeexitaanka, daloolinta, qoridda iyo tirooyinka isku xigxiga, iwm.
Waxaa lagu heli karaa madaxa hal ama laba leysarka. Naqshad hal-abuur leh oo dhinacyo badan leh si loo buuxiyo shuruudaha shaqsiyeed ee macaamiisha.
Filimka wareejinta milicsiga wuxuu ka kooban yahay kuul galaasyo yaryar ah oo ku dhegsan koollada firfircoon ee kuleylka leh, oo leh daaqad PET ah oo hufan si loo ilaaliyo dhinaca milicsiga inta lagu gudajiro. Waxay isticmaashaa tiknoolojiyada kuul galaasyada ka tarjumaya waxayna toos toos ugu iftiimisaa ilayska asalka ah si kor loogu qaado muuqaalka qof kasta oo xidha. Filimka gudbinta kulaylka milicsiga wuxuu leeyahay cimri dherer aad u fiican marka lagu dhaqo guriga iyo dhaqidda warshadaha, waxaana lagu dabaqi karaa substrates kala duwan si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee dharka shaqada.
Filimka wareejinta kulaylka milicsiga waa wax khafiif ah, dabacsan oo lagu gooyn karo naqshad kasta sida garaafyada, jilayaasha iyo astaamaha iyadoo la adeegsanayo mashiin ee xawaaraha sare leh, hab-socod si sax ah u sarreeya. Kadibna waxaa lagu wareejiyaa kuleyl iyo cadaadis dhar kala duwan sida dharka isboortiga oo milicsada, jaakado milicsada, koofiyado milicsada, bacaha milicsiga, kabaha milicsiga, jaakadaha badbaadada iwm.
Tirada sii kordheysa ee soosaarayaasha filimada milicsiga iyo beddelayaasha ayaa ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka gaarka ah ee ay bixiso dhammaystirka leysarka.
Laser-gooyaha laser-ka lagu taliyay ee goynta filimka milicsiga
Isha Laser Laser CO2 RF
Ugu badnaan Ballaca Webka 350mm
Ugu badnaan Ballaca Quudinta 370mm
Ugu badnaan Dhexroorka Shabakada 750mm
Ugu badnaan Xawaaraha Webka 80m/min (waxay kuxirantahay awooda laser, walxaha iyo qaabka gooyay)
Saxsanaanta ± 0.1mm
Cabirka L3580 x W2200 x H1950 (mm)
Koronto 380V 50/60Hz Saddex waji
Awood Laser 100W / 150W / 300W
Ugu badnaan Ballaca Webka 230mm
Ugu badnaan Ballaca Quudinta 240mm
Ugu badnaan Dhexroorka Shabakada 400mm
Ugu badnaan Xawaaraha Webka 40m/min (waxay kuxirantahay awooda laser, walxaha iyo qaabka gooyay)
Cabirka L2400 x W1800 x H1800 (mm)
Daawo laba-madax laser leys-goynta filimka gudbinta kuleylka oo ficil leh!
Raadinta macluumaad dheeraad ah?
Ma jeclaan lahayd inaad hesho ikhtiyaarro badan iyo helitaanka mashiinnada dahabka ah iyo xalka ganacsigaaga ama dhaqannada wax soo saarka? Fadlan buuxi foomka hoose. Khabiiradayada ayaa had iyo jeer ku faraxsan inay ku caawiyaan oo si degdeg ah kuugu soo laaban doona.
Weydii Khabiirka Hadda!